केरासँग किन डराउँछ भाले मुसा ? वैज्ञानिकले गरे अनौठो खुलासा - हिमाली पत्रिका	केरासँग किन डराउँछ भाले मुसा ? वैज्ञानिकले गरे अनौठो खुलासा - हिमाली पत्रिका
केरासँग किन डराउँछ भाले मुसा ? वैज्ञानिकले गरे अनौठो खुलासा
काठमाडौं । वैज्ञानिकहरुले हालै एउटा अनौठो तथ्य पत्ता लगाएका छन् । उनीहरुका अनुसार मुसा केरासँग डराउँछ । केराको बासनाले मुसालाई तनाव दिने वैज्ञानिकहरुको दाबी छ ।
वास्तवमा पोथी मुसाको पिसाबमा हुने रसायनका कारण भाले मुसाहरुमा तनावको स्तर बढ्दछ । वैज्ञानिकहरुले केराको तेलमा कपास चोपेर मुसाको पिँजडामा राखिदिए । मुसाको पिसाबमा पाइने उल्लेखित रसायन रहेको केराको तेलमा चोपेको कपासले पिँजडाका मुसाहरुमा तनावको स्तर ह्वात्तै बढाइदियो । यसबाट वैज्ञानिकहरुले मुसाहरु केरादेखि डराउने पुष्टि गरेका हुन् । –एजेन्सी